Miniature Husky: Maxaad Ka Ogaan Kartaa Mini Huskies Mischievous - Taranka
Miniature Husky: Maxaad Ka Ogaan Kartaa Mini Huskies Mischievous
Siberia Huskies waxaa badanaa loo yaqaan eeyaha waaweyn, laakiin waligaa ma aragtay mid yar?
The Miniature Husky waa uun sida Siberia Husky ka yar mooyee.
Eygan yar ee yar-yar waxaa laga yaabaa inuu yar yahay laakiin wuxuu leeyahay dhammaan shakhsiyadda weyn ee Husky. Huskies waa kuwo aad u daacad ah, qosol badan, oo reer u janjeedha - Miniature Husky kama duwana.
Haddii aad rabto dhammaan madaddaalada Husky oo buuxa laakiin aanad u ballan qaadi karin eey weyn markaa Mini Husky wuxuu noqon karaa eeyga kugu habboon adiga.
Diyaar ma u tahay inaad ku soo dhaweyso saaxiibkaan cusub waqooyiga gurigaaga?
Akhriso si aad ubarato wax walboo aad ubaahantahay inaad ka ogaato eygan yar ...
Gunta yar ee Jaleecada
Dulmar Guud Husky
Immisa ayey ku kacaysaa Qiimaha Yaryar ee Sibiriyanka ah?
Muuqaal yar oo kooban
Tilmaamaha Daryeelka Xun ee Yaryar
Sida Loo Tababaro Mini Husky
Miniature Husky wuxuu leeyahay dhamaan baashaalka Siberia Husky oo leh cabir yar oo haboon.
Tani waa eey aad u firfircoon oo leh dareen aan qarsooneyn oo daacad u ah qoyskiisa. Cabirkoodu waa waxa kaliya ee ka dhigaya inay iyagu ka duwan yihiin heer Siberia Husky ah . Waxaad filan kartaa foojignaan xoog leh oo firfircoon oo jecel bannaanka weyn oo inta badan waqtigooda ku qaadata inay firfircoon yihiin.
Miisaanka: 20-35 rodol.
Qiimo: $ 1500- $ 2500.
Shakhsiyadda: Bulsho, daacadnimo iyo firfircoon.
Qiimo : $ 1500- $ 3000
Nolosha qofka : 12-16 sano
Qoyska Kuxiran : Maya
Cabir : 8-23 rodol
Qiimo : $ 2500- $ 5000
Nolosha qofka : 13-15 sano
Cabir : 10-35 rodol
Qiimo : $ 1500- $ 2500
Nolosha qofka : 12-14 sano
Cabir : 20-35 rodol
Daadiyay : Dhexdhexaad-culus
A Miniature Husky si fudud waa Siberia Husky yar.
Waxay ku kala soocaan xulashada iyo isku darka qashinka qashinka.
Sida dhiggooda waaweyn waa loo kala saaraa sida eey shaqeeya . Tani waxay ka dhigan tahay inay awoodaan inay qaadaan culeysyo yaryar oo fudfudud iyagoo deg deg cagahooda ku jooga.
Markaad eegto eeygan waxaad moodaa inuu qof Siberian Husky saaray shucaac soo yaraanaya. Waxay leeyihiin milix isku mid ah oo jilicsan oo jilicsan iyo dhogorta basbaaska, dabada jilicsan ee jilicsan iyo indhaha buluuga ah ee barafka leh.
Inta badan dadka doonaya inay qaataan Miniature Husky waxay sidaa u sameeyaan maxaa yeelay ma awoodaan inay maareeyaan mid xajmi buuxa leh (waxaa laga yaabaa inay heystaan ​​meel yar oo ay ku noolaadaan ama carruurta yaryar ee guriga ku nool).
Sababtoo ah waa dad aad u bulsheed waxay door weyn ka qaataan qoysaska
Ugu dambeyntiina xusuusnow inay dayactirkoodu ka hooseeyo midka buuxa ee 'Husky' weli way noqon karaan qaar aad u faro yar xilliyada qaarkood.
Sida eey shaqeeya waxay rabaan in loo shaqeeyo inta badan saacadahooda soo jeedka.
La jaanqaadi karaa guryaha.
La qabsasho ka badan kan caadiga ah ee 'Husky'.
Aad u dhaqdhaqaaq badan oo iftiin cagahooda ah.
Waxay kaa caawin kartaa qaadida xirmooyin yaryar iyo xamuul fudud.
Aad u madax adag mararka qaarkood.
Wuxuu ubaahan yahay in firfircoon lagu hayo maalinta inteeda badan.
Caan ku ahaa baxsashada iyo cararidda.
Wuxuu noqon doonaa mid wax dumiya markii la kiciyo.
Subaxda waxaad kici doontaa adiga oo Mini Husky ah oo isku laaban sariirtaada cagteeda. Mar alla markii aad soo jeeddo waxay qaadan doontaa wakhti ka hor saaxiibkaa dhogorta lihi inuu go'aansado inuu kula soo tooso.
Waxoogaa kicinta ka dib saxaabadaada ayaa diyaar u noqon doonta inay maalinta kula bilaabato. Quraacda ka dib waxay u hanqal taagayaan socod ama waxay ku ordi doonaan xaafadda.
Markay tahay waqtigii aad shaqada aadi lahayd waxay ku jiifsan doonaan santuuqooda waxayna sugi doonaan soo laabashadaada - waxaad u baahan doontaa inaad hubiso inay haystaan ​​alaabo badan oo ay ku ciyaaraan si ay ugu sii kiciyaan gudaha santuuqa.
Dhawaaqa gaarigaaga oo jiidaya dariiqa ayaa u diri doonta iyaga oo u ordaya albaabka!
Filo shumis dhunkasho eey ah markaad guriga timaaddo.
Cashada ka dib safar loogu baxo baarkinka si loola ciyaaro asxaabta qaar ayaa ka takhalusi doona dhammaan tamartooda. Waxaad sidoo kale ciyaari kartaa ciyaar qabasho ah oo daawan kartaa iyaga oo ku degdegaya si ay kubad u baacsadaan.
Marka ay tahay in la yimaado guriga labadiinaba adiga iyo saqafkeenuba waad wada daali doontaan. Labadiinaba waad degi kartaan kalfadhi dheer oo salaaxid ah. Hadda waxaa la joogaa waqtigii sariirta, 'Miniature Husky' wuxuu raadin doonaa meesha uu jecel yahay inuu ku nasto - cagaha sariirtaada!
U sii dhunkasho habeen wanaagsan isuna diyaari maalin kale oo xiiso leh berri.
Sida magacooda ka muuqata Siberia Husky wuxuu ka yimid Siberia.
Waxay asal ahaan ka soo jeedeen qabiilka reer guuraaga ah ee Chukchi kumanaan sano ka hor.
Sleds waxay ahaayeen Chukchi's qaabka aasaasiga ah ee gaadiidka guud ahaan dhulka barafka. Marka Xuubka 'loo yaqaan' Huskies 'ayaa loo soo saaray inuu ku qaado sledyadaas cidlada qabow.
Eygan macaan ee saaxiibtinimada leh sidoo kale wuxuu u adeegay wehel intii lagu jiray maalmihii dheeraa iyo adkaa ee dhaxanta. Waxay u quudhin lahaayeen milkiilayaashooda diirimaad waxayna siin doonaan raaxo carruurta Chukchi.
Sannadkii 1908 ayaa la soo saaray Alaska waxaana loo isticmaali jiray in lagu caawiyo xilligii Dahabka Dahabka. Waxay kasbatay aqoonsiga Naadiga Kennel-ka Mareykanka 1930-kii naadkoodana waxaa la aasaasay 1938.
Noocyada yaryar ayaa weli aad u cusub.
Waxay soo baxeen kaliya horaantii 1990meeyadii waxaana markii ugu horeysay soo saaray Bree Normandin.
Soosaarayaasha copy-ka waxay bilaabeen inay soo baxaan 2000s.
Hadda waxaa jira meelo badan oo laga helo Mini Husky oo adiga kuu gaar ah.
Cunsurku wuxuu weli u yahay beddelaad la yaab leh kuwa aan haysan boos ku filan Siberian buuxa.
6 Xaqiiqooyin Xiiso Leh
Guntinta yar ee 'Miniature Husky' waxaa markii ugu horreysay la cunay horaantii 1990-meeyadii, maantana waxaa jira dad fara ku tiris ah oo ku soo koray Maraykanka.
Eeyahaani waxay u egyihiin yeey yar laakiin iyagu waa mar dambe xiriir lama leh yeey marka loo eego eyga kale oo dhan.
Marka lagu daro mini Husky waxaad sidoo kale ka heli kartaa Alaskan Klee Kai iyo Pomsky (labadaba waxaa loo suuq geeyey sidii kuwa yaryar oo loo yaqaan 'Huskies' laakiin waa noocyo kala duwan).
Mini Huskies waa ka fudud yihiin ugana dhaqsi badan yihiin dhiggooda cabbirka buuxa. Iyagu aad ayey u dhaqso badan yihiin waana xiddig dhab ah oo dhabbaha caqabadda haysta.
Hiberiyadii ugu horeysay ee Siberia Huskies waxaa soo saaray qabiilka reer guuraaga ah ee Chukchi waxaana loo adeegsaday in lagu jiido barafka Siberia tundra.
Noocani waa mid ka mid ah fanaaniinta ugu fiican ee baxsadka adduunka. Husky nooc kasta ha lahaadee wuxuu u baahan yahay xayndaab dheer oo adag oo uusan ka boodi karin ama ka hoos qodan karin.
Miniature Husky ayaa wada xirxiraya daacadnimada caatada iyo shakhsiyadda jecel xirmo yar.
Isla marka ay gurigaaga soo galaan waxay isu caddaynayaan inay xubin ka yihiin qoyskaaga!
Noocani wuxuu u fiicanyahay eeyga qoyska sida dhiggiisa cabbirka leh. Carruurta yaryari waxay jeclaan doonaan eey yar oo ciyaarsiiya oo aan runti weligood korin, isla markaana bucshiradu si dhakhso leh ayey u baran doontaa inay qof walba u aqbasho qayb ka mid ah baakadeeda.
Halka eyda yaryar badankood la qabsadeen qaab nololeedka gudaha tarankaani waa eey dibadeed.
Waxay leedahay tamar badan oo u baahan jawi nabdoon oo laga sii daayo.
Tani ma aha nooca saxda ah ee baradhada sariirta maxaa yeelay waa inay cagahooda ku istaagaan inta badan saacadahooda soo jeedka. Hadday dayacaanna waxay si dhakhso leh u noqdaan kuwo wax dumiya.
Iyagu maahan eeyga dhabta laakiin guud ahaan way ka jecel yihiin eyda kale ee shaqeeya.
Filo dhunkasho badan oo eyda dhunkashada ah ee ka soo baxa qashinka yar ee la jecel yahay.
Ha u ogolaan in cabirkoodu ku khiyaaneeyo.
Kuwani shaqa-yarayaasha ah ee shaqada ka shaqeeya waxay si fiican u awood u leeyihiin inay guriga ka caawiyaan. Xitaa waad ku tababaran kartaa si ay u jiidaan gaari yar ama u kaxeeyaan xirmo fudud oo ulo ah.
Iyadoo aan loo eegin cabirkooda dhammaan Huskies waa loo yaqaan baroorkooda .
Waxay u badan tahay inaad maqasho cabaadka markay caajisaan ama ay dareemaan madax adag. Filo cabashooyin yar halkan iyo halkaas marka eeygaagu xaalad ku jiro. Kaliya xusuusnow inaadan ansaxinin eey buuq badan markii ay ciyeyso si aad dareenkaaga u hesho.
Waqtiga intiisa badan si kastaba ha noqotee, saxaabadaadu waxay noqon doontaa mid deggan oo edeb leh.
Tani waa eey aad iyo aad u jahaysan oo xagga qoyska u janjeedha oo leh xidhiidh dabiici ah oo dad ah. Carruurta da 'kasta ha ahaadeene waxay jeclaan doonaan ardaygan oo ardaygu dhabarka ayuu u jeclaan doonaa.
Waxay si kalgacal leh u aqbali doonaan xubin kasta oo cusub oo ka tirsan labada ama afar lugood!
Haysashada eeygan had iyo jeer ma sahlana.
Waxay noqon karaan kuwo tijaabo ah mararka qaarkood waxayna isku dayi karaan inay isku sheegaan inay yihiin hogaamiyaha xirmada.
Waxaa laga yaabaa inaad la gasho xoogaa doodo ah saaxiibkaaga dhogorta leh waqti ka waqti laakiin marwalba way imaan doonaan.
Nasiib darrose ciyaalkan yar yar qiimo jaban kuma yimaadaan.
Soo saarista Husky yar waa adagtahay tanina waxay ka muuqan doontaa qiimaha eeyaha. Ku darso eeyadan yaryar waxay ku jiraan baahi aad u sareysa!
Eey ayaa sida caadiga ah kugu kici doona meel kasta oo ka bilaabma $ 1500- $ 2000.
Si kastaba ha noqotee, eeyooyinka qaarkood ee khadadka show laga yaabaa inay ku kacaan $ 2500.
Haddii aadan haysan miisaaniyaddan oo kale waxaad tixgelin kartaa inaad ka korsato hoyga - hase yeeshee tani maahan nooc hoyga caadiga ah. Haddii aad awoodo inaad mid ka hesho hoyga markaa waxaad ku bixin doontaa qiyaastii $ 350 oo ah khidmada korsashada.
Ey $ 1500- $ 2500
Dadka waaweyn $ 1200- $ 2000
Korsasho $ 250- $ 350
A Miniature Husky waa nooc raaxo leh sidaa darteed way ka qaalisan yihiin kuwa eyda kale ee halkaas ku nool. Waa inaad meel dhigataa miisaaniyad uguyaraan $ 1500 eeygan yar.
Alaskan Klee Kais badanaa waxaa loo iibiyaa sidii Ghadafi yar. Si kastaba ha noqotee tani waa eey aad u kala duwan oo leh shakhsiyad ka duwan iyo shuruudaha daryeelka.
Waxaad u baahan doontaa alaab badan oo lagu ciyaaro ee gudaha iyo dibadda ah si aad eeygan firfircoon ugu faraxsanaato.
Noocani wuxuu ubaahanyahay is dhexgal bulsho badan tanna waxaa kamid ah waqtiga xanaanada caruurta yar yar iyo xanaanada eyga. Adeegyadan badanaa waxay qaadaan lacag saacaddii waxaana laga yaabaa inay shaqeeyaan ugu yaraan $ 25- $ 40 maalintii.
Haddii aadan ka iibsanaynin pup-kaaga rasmiga ah ee loo yaqaan Mini Husky breeder markaa waxaa haboon inaad iska hubiso abtirsiimada eygaaga si loo hubiyo inaad heshay waxaad bixineysay.
Nasiib darrose maadaama noocani yahay mid caan ah waxaa jira khiyaanooyin badan oo halkaa ka jira. Bixiyeyaasha qaarkood ayaa isku dayi doona inay iibiyaan Pomskies ama iskudhaf kale sida Miniature Huskies. Si kastaba ha noqotee, iskudhafyadan ayaa yeelan doona dabeecado aad uga duwan kan Huskies-ka saafi ah.
Waxaad filan kartaa noocani inuu si sax ah u ekaado sida Siberia Husky - waa yaryahay.
Waa inaysan dhererkoodu dhaafin 17 inji.
Muuqaalkooda qeexayaa waa indhahooda buluuga ah ee quruxda badan. Si kastaba ha noqotee mararka qaarkood indhahoodu waxay noqon karaan amber ama hazel brown - heterochromia sidoo kale waa si layaab leh ayaa caan ku ah caanahan.
Mini Huskies waxay leeyihiin aar weyn oo leh sanka madow ama bunni iyo dhagaha oo si buuxda u kacsan.
Ey yaryar waxay yeelan karaan dhago wareegsan oo kor u tilmaamaya markay korayaan.
Cunugaaga yar wuxuu sidoo kale yeelan doonaa dabada jilicsan ee jilicsan ee jilicsan.
Eygan ayaa yar oo ku filan inuu noqdo eey dhabta ah laakiin weli waa weyn yahay si uu u qabto shaqada loo soo saaray.
Ragga waxay istaagi doonaan inta udhaxeysa 14-17 inji waxayna culeys ahaan noqon doonaan 25-35 rodol.
Dumarku waxay istaagi doonaan inta udhaxeysa 13-16 inji oo culeyskoodu waa 20-30 rodol.
Noocani wuxuu leeyahay jaakad diiran oo dhererkeedu dhexdhexaad yahay oo qalafsan kana ilaalinaya cimilada qabow.
Madow iyo caddaan, ama milix iyo basbaas ayaa ah midabada dhogorta ugu caansan.
Waxa kale oo aad ka heli kartaa Miniature Huskies oo ah midab lacag ah ama midabbo leh.
Maaskaro midab madow leh oo ka soo horjeedda muuska cad waa muuqaal aad u badan oo loogu talagalay saqafkan quruxda badan.
Sida dhiggooda weyn eeygan yar yahay waa daadshe aad u culus - waxaad u baahan doontaa inaad cadayato ugu yaraan laba jeer usbuucii.
A Miniature Husky waa saaxiib yar oo xiiso leh oo hareeraha laga helo laakiin waxay noqon karaan kuwo aad u tiro yar oo faraxsan.
In kasta oo ay ka bilow badan yihiin saaxiibtinimo marka loo eego noocyada cabbirka caadiga ah haddana waxay u baahan yihiin daryeel fara badan. Qashinkani wuxuu u baahan yahay jimicsi fara badan milkiilahooduna waa inuu diyaar u yahay inuu ka kaco sariirta oo ciyaaro.
Ma aha nooca eey laga filan karo inuu keligiis maaweelo.
Koodhadhkooda qalafsan ayaa sidoo kale u baahan doona qurxin joogto ah.
Eygan yar wuxuu u baahan doonaa ugu yaraan 90 daqiiqo oo jimicsi ah maalin kasta.
Waad sameyn kartaa tan hal mar ama waad jebin kartaa maalinta oo dhan. Waad kaxaysan kartaa barashadaada adiga oo ordaya ama ordaya ama xitaa ku xiraya xarigga baaskiilkaaga markii aad fuushan tahay.
Kaliya xusuusnow in eeygan uu yahay farshaxan baxsade wanaagsan waa inay ku ekaadaan xadhig xitaa markay ku ciyaarayaan daaradda.
Socodkooda kadib waa inaad siisaa iyaga waqti joogto ah oo ay ciyaaraan.
Tan waxaa ka mid ah orodka iyo boodka, ciyaaraha la qabsashada, fikradaha maskaxda iyo koorsooyinka carqaladda. Alaabta lagu ciyaaro ee farsamada gacanta ayaa saacado xiiso leh siin kara sidoo kale.
Dabcan xilliga jiilaalka eygaaga ayaa jeclaan doona inuu ku ciyaaro barafka. Xitaa waxaad awood u yeelan kartaa inaad ku riixdo inay ku jiidaan sled (sida awoowayaashood u sameyn lahaayeen).
Wadarta Waxqabadka Maalinlaha: 90 + daqiiqo.
Waxqabadka ugu xiisaha badan: Ku ciyaar barafka.
Miniature Husky waa daadi aad u weyn.
Eeyahaani waxay daadiyaan marar badan si ay u ilaashadaan jaakadooda xilliyeed.
Ku caday bawdadaada laba jeer usbuucii burush iyo shanlo loogu talagalay inay gaaraan labada lakab ee jaakada.
Markuu eeygaagu afuufo jaakadiisa guga iyo dayrta waa inaad cadayato maalin kasta.
Hubi cidiyaha eeyahaaga 2dii toddobaadba mar. Waxay u badan tahay inay iyagu xidhan doonaan markay ordaan oo ciyaaraan laakiin ciddiyaha waa in la jarjaro hadday bilaabayaan inay is rogaan.
Ugu dambeyntii hubi inaad nadiifiso oo ay qalajiso dhagaha si looga hortago caabuqyada.
Eygan waa inaan la siinin cunnooyinka yaryar ee caadiga ah.
Heerkooda firfircoon ee sarreeya waxay ka dhigan tahay inay cunaan wax yar oo ka yar eyga cabbirkiisu dhan yahay.
Cun iyaga 2 koob oo kibble tayo sare leh oo loo sameeyay eeyaha firfircoon. Waxaad iyaga siisaa hal koob subaxda quraacda ah iyo hal koob fiidkii waqtiga cashada.
Eeyaha tamarta sare leh way awoodaan hayso karbohaydraytyo badan inta badan noocyada kale. Kaliya iska hubi in karbooyinkani ay ka yimaadeen ilo dabiici ah oo caafimaad qaba sida miro iyo khudrad. Barootiinka ayaa ah maaddada labaad ee ku jirta eeyga nafaqada leh. Waa inay ka timaaddaa ilaha hilibka dhabta ah oo waligood wax soo saar ama wax buuxiyo.
Ujeeddada u dhexeysa 800 iyo 1000 kalori maalintii.
Inta udhaxeysa 8 iyo 12 toddobaad da'daada Miniature Husky miisaan doonaa inta udhaxeysa 5-10 rodol. Dumarku waxay ku jiri doonaan dhamaadka hoose ee culeyskan.
At dhamaadka 6 bilood dheddigga waxay u dhexeyn doonaan 13-15 rodol oo lab ah oo miisaankoodu yahay 16-18 rodol.
Markay dhalaan dhalashadooda koowaad eygaagu waa inuu miisaankiisu u dhexeeyaa 18-25 rodol. Waxay gaari doonaan culeyskooda oo dhan 20-35 rodol markay gaaraan 16 bilood.
Isku soo wada duuboo tani waa nooc caafimaad oo aad u caafimaad qaba sikastaba indhahooda quruxda badan ee buluuga ah ayaa caan ku ah inay mashaakil la galaan.
Indho-beelku waa welwelka ugu badan ee caafimaad ee tarankaas. Waxay u horseedi kartaa indho la'aan haddii aan la daaweyn oo sida caadiga ah waxay dhacdaa oo keliya ka hor eeyga 5 sano jir ah - markaa hubi inaad tahay qof caqli-gal ah indhahooda hubinaya .
Daruur kasta oo ku jirta ishaada eyga ayaa sabab u ah booqashada dhakhtarka xoolaha.
Cudurka qanjirka 'retinal retrop atrophy' waa cillad aad u daran. Waa xumaanshaha xubinta dambe ee isha oo ugu dambayntii keenta indho la'aan.
Mararka qaarkood qiiq caano ah ee eygaaga isha ayaa kuu sheegi doona inay wax qaldan yihiin. Laakiin inta badan xaaladdu wax calaamado ah haba yaraatee ma laha illaa aragga naafadu ka bilaabato inuu dego.
Nasiib darrose ma jirto wax daaweyn ah ama dawo loo heli karo xaaladdan oo eydu waxay la qabsan doonaan nolosha iyagoo aan arag arag.
Muddo intee le'eg ayuu gaagaaban yahay Husky?
Waxaad ka filan kartaa inay yeeshaan cimri lamid ah dhigooda cabbirka buuxa.
A Miniature Husky wuxuu noolaan doonaa ilaa ay ka gaarayaan 12-14 sano.
Tababbarka eeygan waxay noqon kartaa caqabad.
Marwalba ma rabaan in la tababaro waxayna noqon doonaan kuwa qaylo badan marka aysan ku jirin niyadda.
Waa inaad isku daydaa inaad ka dhigto tababbarka mid madadaalo leh dhammaan noocyada ciyaaraha gadaasha iyo koorsooyinka. Ka faa'iideyso xirfadahaaga dabeecadda eeyga eeyga oo aad ku dejiso bandhigga eygaaga deyrka.
Ka caawi cunuggaaga yar yar socodkiisa koorsada isla markaana qariso waxyaabaha ay jecel yihiin iyo waxyaabaha ay ku ciyaaraan si ay u siiyaan dhiirigelin. Samee koorso cusub markasta si eeygaagu uusan waligiis ogeyn waxa laga filayo.
Intaad tababaraneyso waa inaad adkeysaa laakiin waligaa ha adkeysan.
Eygaagu wuxuu u baahan yahay inuu barto inuu ku ixtiraamo oo wuxuu sameyn doonaa oo keliya haddii aad sidoo kale muujiso inaad ixtiraamayso.
U muuji eeygaaga xoogaa xushmad ah adoo ku ammaanaya dhaqankooda wanaagsan oo ha u dhiibin marka ay si xun u dhaqmayaan. Waxay baran doonaan waxay awoodaan iyo wixii aan uga bixi karin si dhakhso leh.
Kaliya xusuusnow tani waa eey aad u bulsheed.
Bulsho xumo ayaa ka mid ah sababaha ugu badan ee dhaqanka xun .
Xannaanada carruurta eeyyooyinka iyo xanaanooyinka eyggu aad ayey ugu fiican yihiin xayawaankan. Halkaas waxay ku yeelan doonaan saaxiibo cusub inta ay ku dhaqmayaan asluubtooda ugu wanaagsan.
Miniy Huskies waa inay maskaxdooda iyo jidhkoodu shaqeeyaan markasta.
Tababbarka waad u rogi kartaa shaqo oo waxaad siin kartaa shaqo fudud oo ay ku qabtaan guriga dhexdiisa.
Miniature Husky waa saafiir Siberian Husky ah oo cabirkiisu ka yaryahay.
Maaddaama ay aad u yar yihiin dayactirkoodu waxyar ayuu ka hooseeyaa wuxuuna la jaan qaadi karaa guryo iyo guryo yaryar.
Qashin-qubkaani wuxuu ku habboon yahay qof kasta oo doonaya Husky laakiin ma hayn karo mid cabbirkiisu dhan yahay.
Weli waxay leeyihiin dabeecad bulsheed isku mid ah, ciyaar iyo daacadnimo awoowayaashood oo buuxa.
Eeyadan waxay jecel yihiin inay shaqeeyaan oo ay ciyaaraan - waxay jeclaan doonaan inay guriga ka caawiyaan. U hibeynta qoysaskooda waa mid ka mid ah waxyaalaha badan ee iyaga gaarka ka dhiga.
Kaliya xusuusnow in eeygan uusan aheyn dusha sare ee ciyaarta.
Waxay leeyihiin tamar badan waxayna rabi doonaan inay cagahooda ku taagnaadaan sida ugu macquulsan.
Qof kasta oo doonaya inuu qaato Guntin Giraanta ah waa inuu si buuxda ugu diyaar garoobaa Siberia Husky oo ku jira baakad yar.
Haddii aad waqti siiso inaad si fiican u fahamto waxa eeygan yar u baahan yahay waxaad isku arki doontaa mid ka mid ah saaxiibbada ugu fiican adduunka oo dhan.
Sheepadoodle: Waa Maxay Sida Lahaanshaha Isku Darsanka Sheepdog Poodle
Chihuahua Dog FAQs iyo Macluumaadka Taranka
sawiro isku dhafka poodle maltise
shaybaadhka iyo collie isku darka eeyaha
imisa ayay ku kacaysaa maltise shaaha ah
sida loo xidho suunka eeyga yar